कांग्रेस विवाद समाधानतर्फ, पौडेल समूह भन्छ - विभाग भने अस्वीकार नै गर्छौं
बाह्रखरी - केशव सावद आइतबार, कात्तिक २३, २०७७
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विवाद समाधान उन्मुख देखिएको छ । आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठक पार्टीमा देखिएका विवादहरु समाधान गरेर अघि बढ्ने सहमति जुटाएको छ ।
केन्द्रीय सदस्यसहित बस्दै आएको पदाधिकारी बैठकले पार्टीमा देखिएका पछिल्ला विवादहरु समाधान गरेर अघि बढ्ने सहमति जुटाएको नेताहरुले बताएका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पदाधिकारी बैठक समझदारी उन्मुख देखिएको जानकारी दिए ।
“मन माझा माझ गरेर आशंकालाई निवारण गर्ने काम भएपछि पदाधिकारी बैठक समझदारी उन्मुख भएको छ । अब अनौपचारिक बैठक बस्दैन । २७ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अब सहमतिमै निर्णयहरु गर्छ । कुरा मिलिसक्यो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
यस्तै बैठकमा सहभागी पौडल समूहका नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि पदाधिकारी बैठक सहमतितर्फ उन्मुख भएर सकारात्मक उपलब्धिहरु हासिल भएका प्रतिक्रिया दिए ।
“आज सहमति भएन भन्‍ने होइन, केही विषयमा एकदमै सहमतितिर उन्मुख भएर सकारात्मक उपलब्धिहरु भएका छन् । तर, अन्तिम सहमतिको निर्णय भने भइसकेको छैन,” उनले भने, “अन्तिम टुंगो लाग्न भने बाँकी छ । परिस्थिति सहमतितिर उन्मुख छ ।”
विभाग गठन र मनोनयन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, संगठन समायोजन, जनसम्पर्क समिति, भ्रातृ संस्थाको पदावधि, भ्रातृ संस्थाको पदाधिकारीको दोहोरो जिम्मेवारीलगायतका विषयमा कांग्रेसमा विवाद थियो । तीमध्ये अधिकांश विवादहरु पार्टीको विधानमा गरिएको व्यवस्थालाई आधार मानेर समाधान गर्न कांग्रेस नेताहरु सहमत भएका छन् ।
फेरि सर्‍यो कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
“१६ बुँदेमा सबैभन्दा बढी उठाएको विषय भनेको पार्टीको विधान विपरित क्रियाशील सदस्यता वितरण भयो भन्ने हो । त्यसलाई सच्याउँदै विधानले जे भन्छ त्यसको भावनाअनुसार गर्ने भन्ने कुरामा करिब-करिब सहमति भएको छ । सदस्यताका सम्बन्धमा विधानलाई अक्षरशः पालना गरेर अगाडि जाने, त्यसो नभएका ठाउँहरुमा सच्याउने सहमति भएको छ,” नेता केसीले भने, “जनसम्पर्क समिति, निर्वाचन नभएका भ्रातृ संगठनहरुका बारेमा पनि विधानअनुसार जाने भन्ने भएको छ ।”
उनले विभाग गठन र विस्तारका बारेमा भने केही सहमति नजुटेको बताए । “विभाग गठनलाई हामी अस्वीकार नै गर्छौं । यसको अन्तिम निर्णय भइसकेको स्थिति छैन । त्यसमा कुनै सहमति भएको छैन । हामी विभाग मान्दैनौं ।”
पदाधिकारी बैठक सहमति उन्मुख देखिए पनि कांग्रेसले सोमबारका लागि बोलाएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भने स्थगित गरेको छ । सहमहामन्त्री डा. महतले उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला होम आइसोलेसनमा रहेका कारण बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।
“केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक उपसभापति र सिटौलाजी आइसोलेसनमा रहनुभएका कारण २७ गते बस्ने भएको छ । भोलि टेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ । रिजल्ट आएपछि उहाँहरु पनि बैठकमा सहभागी हुनुहोला भनेर बैठक सारिएको हो,” उनले भने ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई मध्यनजर गरेर केही दिनअघि गरिएको कोरोना परीक्षणका क्रममा उपसभापति निधि र पूर्वमहामन्त्री सिटौलाको सुरक्षार्थ तैनाथ सुरक्षाकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो ।
आफ्नो समूहको ‘अम्ब्रेला’ बन्न सक्लान् रामचन्द्र पौडेल ?
सिटौला कांग्रेस नेतृत्व चयनमा निर्णायक हुन सक्लान् ?
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले ओली समूहका नेताहरु सभामुखसँग आक्रोशित बनेका छन् । सभामुखले तटस्थ व्यवहार नगरेको, राजमोका सांसदलाई सर्वोच्चको... १२ मिनेट पहिले
काठमाडौं । “पार्टी संगठनमा जितहारको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनैपर्छ, सात प्रदेशमा कतै टेक्ने ठाउँ छैन, यत्रो इतिहास बोकेको गर्विलो पार्टी... ७ घण्टा पहिले
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै दुईवटा निर्णयहरु गरेका छन् । शनिबार बेलुका उनले मनसुन सुरु... ७ घण्टा पहिले